Yakanakisisa China Kukunda Dhaimondi Mosaic Mosaic Wall Décor Nhema uye White Mosaic Tile Yekugezera Mugadziri uye Fekitori |VICTORY MOSAIC
China Kukunda Dhaimondi Mosaic Mosaic Wall Décor Black uye White Mosaic Tile Bathroom
Transparent 13 zviso zvegirazi girazi mosaic machipisizvakasanganiswa neelectroplatingbvisa chimiro chegirazi machipisipamambure,kunaka kwakadaro kusingaenzaniswi kuita kuti imba ive yakajeka uye inopenya,inodiwa nevagadziri vezvivakwa nevaridzi vemba zvakafanana.
Diamond kuchekauyeelectroplating process inoita kuti dhaimondi redu mosaic tile refract mwenje kuratidza shanduko yeruvara uye mufananidzo unoramba wekuona maitiro.Theelectroplatinggirazi rinemosaic nhema simbieffect.
Iyi tile yakasviba nechena mosaicaneiridescent kupera, iwe uchaona mavara akasiyana kubva kumakona akasiyana.Inogona kuita seyero,bhuruu, girini, orenji, pinketc, asimosaicchaizvoizvo yakagadzirwa negirazi jena rakajeka, rinongoita sedhaimani.Pakuwedzera electroplatinggirazimachipisi mukati, inoita kuti tile inakidze.
Iyo mosaic tile mesh inotsigira haingorerutsa kuisirwa, zvakare inobvumira kuti mataira apatsanurwe izvo zvinowedzera kune yavo dhizaini kushanduka.
Zviri nyorekucheka girazi mosaic tilekune zvidimbu zvidiki, zvishandise muimba yekugezera semosaic border tiles.
l Hunhu Hwepamusoro: Yakapukutwa girazi pamusoro, kugadzirwa kwepamusoro.
Shandisa pH neutral cleaner yekugara uchigadzirisa.
0% kunyura kwemvura, kusimba uye hunyoro-uchapupu
Good corrosion resistance uye hupenyu hurefu hwebasa
Ideal Use: Diamond mosaicinogona kushandiswa imba yekurara, yekutandarira, imba yekupfeka, yekubikira backsplash, yekugezerawalletc.
Iyi nhevedzano ine mavara matatu, inopenya chena, inopenya nhema, inopenya dema yakasanganiswa nechando.Material igirazi chete.Chip saizi 15*15+15*48+15*98mm, saizi yeshizha 305*305mm.Ukobvu 8mm.Mesh yakaiswa.Rimwe bhokisi 11 mapepa asina munhu pasuru kana gumi mapepa ane yega pasuru.Bhokisi rimwe nerimwe rinorema 17.5 kgs.Tinogona kutengesa muma pallets neimwe pallet 36 bhokisi, 45 bhokisi, 54 bhokisi, 63 bhokisi kana 72 bhokisi.
Ichi chinhu chatinotengesa zvakanaka muU.SA, Canada, Mexico, United Kingdom, Germany, France, Spain, Poland, Russia, Indonesia etc. kusvika zvino.
Model Number VJ5N01, VJ5N02, VJ5N03
Chipi saizi (mm) 15*15+15*48+15*98
Color Muchena, mutema
Finish Type Girazi rinopenya, nyore kuchenesa
Muenzaniso Interlocking Pattern
Shape Bvisa uye sikweya
Bhokisi Huremu (Kgs/Bhokisi) 17.5
Zvakapfuura: Kukunda Mosaico Ceramic Mosaic Tile Mosaic Border Tiles Kitchen Mosaic
Zvinotevera: Victory Glass Mosaic Tiles Anoshongedza Mosaic Matiles Mosaic Bathroom Matairi Matema uye Machena Mosaic Tile
dema mosaic tile fekitori
black mosaic tile mugadziri
black mosaic tile mutengesi
china black mosaic tile
high quality black mosaic tile
kutengeswa kunopisa dema mosaic tile
Ocean Blue Girazi Seashell Mosaic Wall Tiles Chi...
Black Wire Surface Diki Bark & ​​Stainless ...
Porcelain Ceramic Mosaic Tile Yakapenya Ceramic Mo...
Hexagon Diamond Mirror Crystal Girazi Mosaic Til...
Mosaic Subway Tile Hombe Mosaic Tiles Aluminium ...
Girazi Mosaic Dhizaini yeKitchen Backsplash Grad...